NANTSI INTO UKATY KUNYE NEORLANDO'S BABY GIRL'S NAME DAISY MEANS! - IINDABA
Nantsi into uKaty kunye neOrlando's Baby Girl's Name Daisy Means Means!
Olunjani lona udumo! ukaty Perry nomntu oza kutshata naye Orlando Bloom bazise ukuqala komntwana wabo wokuqala, intombi uDaisy Dove Bloom ngolwesiThathu, nge-26 ka-Agasti. Ngokwendalo, sikhathazekile ngesihloko somntwana omtsha weelekese - ke sizimisele ukumba nzulu kwimvelaphi kwaye kuthetha ntoni ngesihloko.
Ndingu ethan bradberry iyure e-1
IDaisy ngumfanekiso wobumsulwa kunye nesiqalo esitsha, ngokuhambelana neFlimeMeanings.org, ngelixa amahobe efuzisela uxolo nothando. Ewe kunjalo, abalandeli bakaKaty baya kwazi ukuba usungule umculo obizwa ngokuba yiDaisy ngo-2020 ngaphambili kunokwamkela umntwana, esenza ukuba i-moniker yongeze ngakumbi. Kwaye, umdlalo kaDaisy ngokupheleleyo kunye nesihloko sakhe sokugqibela, Bloom!
Inene ilekese ukubona umama notata onekratshi bezonwabela ngomfazi wabo omtsha womntwana. Ngokwenyani, umntu ongaphakathi ucetyisiwe Ubomi kunye nesimbo kuphela ukuba i-Orlando, i-43, yonke yayi malunga nokuthatha ngaphakathi kwamaxesha amancinci ngenkwenkwezi ye pop ukukhulelwa ngo-Matshi. Uhlikihla isisu sikaKaty kwaye ucula kamnandi emntwaneni wabo, unikezelo luye lwangxama. Uyimasaja i-ft yakhe, ayigubhe amagxa akhe, ayiphucule kangangoko anakho.
Ngaphandle kokongeza okuchulumancisayo kwikhaya labo leelekese, esi sibini asibonakali sisebenza ukuya ngaseludongeni nangaliphi na ixesha ngokukhawuleza. Omnye umntu wangaphakathi watyhilelwa LS inyanga efanayo ukuba ngokungathandabuzekiyo bazinikezele kwi-1 enye, nokuba akukho mvume yomtshato ngaphakathi komfanekiso okanye cha.
Bobabini bebekwiphepha elifanayo lewebhu malunga nokutyhala bucala umtshato, ngakumbi i-Orlando, unikezelo lwesibini oluchaziweyo. Uthembekile ngokuthetha ukuba ebephantsi kweso sitrato kwaye khange anqwenele ukuyenza kwakhona. U-Katy utshisiwe, naye. Wayesoyika umtshato, kodwa intliziyo yakhe itshintshile, ngakumbi ngokuza komntwana. Kodwa ngoku ngoku, konke kungokuzisa olu sana emhlabeni.
ukufa kwam ukuphela
Ngokucacileyo, umama notata abanekratshi baziva ngokwenene ukuba uthando lwabo lomelele ngokwaneleyo. Bahlanganisene, bazinikezele kwaye iphepha elincinci alinakutshintsha iimvakalelo zabo, u-insider uyaqhubeka. Ngokwenyani, ukusuka kumava abo, ibiya kutshintsha imiba.
Inye into yokwenza into elungileyo, ayinakuze itshintshe uthando lwabo kuDaisy kunye nesihloko sakhe esihle!
Izigaba: Amazon-Prime Hulu Hollywood
yeyiphi iodolo yokubukela ibhola yedragini
ukutya okupheleleyo kuvulwe ngephasika
I-effie trinket lady gaga
Kutheni le nto imike tyson ine-lisp
dave mirra mtv umngeni
Imihla yokugqibela yesithixo saseMelika
ibrielle biermann snapchat igama lomsebenzisi